Njengamanje, amabhati wendabuko alahlekelwe ukubaluleka kwawo. Bashintshwa ngamakamelo okugeza, ama-bathing sedentary. Into esemqoka ethinta ukuklama kwayo ukuhambisana. Emva kwakho konke, kuvame ukulala endlini yokugezela, futhi ngisho ne-foam, hhayi isikhathi esanele, futhi eziningi futhi impilo ayivumeli. Futhi amamitha angaphezulu wesigcawu alondoloziwe azokuvumela ukuba ufake enye into ewusizo, isibonelo, ibhasikidi yokugeza noma umshini wokuwasha.
Kule minyaka eyishumi eyedlule, abaningi baye bathanda ukugeza okudlulayo, okuyinzuzo enkulu ebusweni bayo. Uma kuqhathaniswa nedokodo lokugeza, linezindleko eziphansi, futhi liheha ngisho nangaphezulu. Amamodeli okugeza afana kakhulu, kanti abanye babo bahlala isikhala esincane kunamanzi. Ukugeza okuhleliwe okwamanje kunomnyango kwenza kube lula kakhulu kubantu asebekhulile nabakhubazekile. Lezi zigaba zabantu ziye zazisa zonke izinzuzo zokugeza okunjalo. Induduzo eyinkimbinkimbi yayizwakala abantu abakhubazekile ngenxa yezifo ze-musculoskeletal, ngoba ngaphandle kosizo lwabafokazi ekugezeni okujwayelekile abakwazi ukukhuphuka. Kodwa-ke, kukhona ukungalungi okuncane: ukuba uphume kuwo, kufanele ulinde kuze kube yilapho amanzi eseduzane ngokuphelele, bese uvula umnyango.
Ukuhlala okugeza, nazo zonke izinzuzo nezindleko, kunemiphumela yokungabikho. Ukugeza, isibonelo, ekugezeni akuyona into elula kakhulu, uma kuqhathaniswa nesha. Impela, izinqubo zamanzi, kumnandi kakhulu ukujabulela ukulala phansi kunokuhlala.
Kufanele kucatshangelwe ukuthi ngenxa yendawo encane yokugeza, i-spray izowela phansi kanye nemvelo eseduze, ngakho-ke uma uyifaka, udinga ukunakekelwa ikhethini elihle noma umnyango okhethekile.
Njengalabo abavamile, ukugeza okudlulayo kungaphathwa yensimbi, insimbi, ipulasitiki, i-acrylic. Ngayinye yalezi zinto zinezinzuzo zayo, ukuze umthengi abe nokukhethwa okukhulu kwekhethelo elifanele kunazo zonke.
Kulabo abathokozela ukulula, ukwethenjelwa nokulula, ukukhetha okuhle kakhulu kuyoba yindawo yokugeza.
Igumbi elilodwa eliguqukayo ngezikhathi ezithile emswakeni nasezingeni lokushisa yindlu yokugezela. Ngakho-ke, izinga lemishini elisetshenziselwa imishini yalo kumele lihlale liqinile. Indawo ekhululekile lapho ungakhululeka khona futhi uqaphele izinqubo ezimnandi zomzimba wakho ibhuloho elihlala phansi.
Uma kuqhathaniswa nezincintiswano zayo zama-acrylic nezensimbi, ukugezwa kwensimbi ensimbi kunamathuba amaningi. Okokuqala, sinesisindo esanele, esikuvumela ukuba sigcine isikhundla sayo esiphezulu kakhulu. Kufakwe ngokuqinile emdongeni, ensimbi noma e-acrylic ekubhaleni kwamanzi noma ekugezeni ukudala ukudlidliza okuqhubekayo, okungagcina kuholele ekwehleni kwamatayela. Ukugeza kwe-iron, ngenxa yokuzinza kwayo, akudala izinkinga.
Enye inzuzo yengubo yayo ye-polymeric, amandla amakhulu okuqinisekisa ukuqina komkhiqizo. Ukugeza okunjalo nokunakekela kahle kungadlulela eminyakeni engamashumi amahlanu.
I-cast cast iron, uma iqhathaniswa ne-acrylic noma ensimbi, inomsindo omuhle kakhulu wokumisa umsindo. Lapho amanzi ethululiwe, akenzi umsindo omkhulu, ngokungafani nokugeza okuwenziwe kwezinye izinto. Inzuzo ebaluleke kakhulu yokugezwa kwensimbi yensimbi ukugcina ukushisa isikhathi eside. Amanzi lapha agcina izinga lokushisa eliphezulu isikhathi eside, kuyilapho izinsimbi noma ama-acrylic okugeza zidinga ukuthuthwa njalo kwamanzi ashisayo.
Ngenxa yekhwalithi ephezulu ye-koqweqwe lwawo esetshenziselwa ukumboza ukugezwa kwe-cast-iron, kulula kakhulu futhi kulula ukunakekela.
Abantu abaningi bazama ukuthola umkhiqizo we-iron cast. Isihlalo sokubhuku, esenziwe nge-iron cast, sithole ukuphila okude kakhulu ngenxa yokusebenzisa ubuchwepheshe obuphambili kakhulu ekukhiqizeni kwawo.